Umhlahlandlela Ophelele Wokusebenzisa i-LinkedIn Sales Navigator | Martech Zone
I-LinkedIn iguqule indlela amabhizinisi axhumana ngayo. Yenza okuhle kule nkundla ngokusebenzisa ithuluzi layo le-Sales Navigator.
Amabhizinisi namuhla, noma ngabe makhulu noma mancane kangakanani, athembele ku-LinkedIn ukuqasha abantu emhlabeni wonke. Ngabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezingama-720, le nkundla ikhula nsuku zonke ngosayizi nenani. Ngaphandle kokuqasha, i-LinkedIn manje seyibaluleke kakhulu kubakhangisi abafisa ukukhuphula umdlalo wabo wokukhangisa wedijithali. Ukuqala ngokwakha ukuxhumana ekukhiqizeni umkhondo nokwakha inani lomkhiqizo elingcono, abathengisi babheka i-LinkedIn ukwengeza okungabizi mali kukho konke marketing isu.
I-LinkedIn Yokumaketha kwe-B2B
Phakathi kwezinye izinto, i-LinkedIn ibe nomthelela omkhulu ekukhangiseni kwe-B2B. Ngamabhizinisi acishe abe yizigidi ezingama-700 avela emazweni angama-200 + akhona kuleplatifomu, manje isisetshenziswa esibaluleke kakhulu kumabhizinisi we-B2B. Ucwaningo lukhombisa lokho 94% yabathengisi be-B2B sebenzisa i-LinkedIn ukusabalalisa okuqukethwe kwabo. Abasunguli benkampani ye-B2B kanye nabaphathi be-CEO bazama ukuba Abathonya be-LinkedIn ngokwakha ukuzimela kwabo ngokuthunyelwe okuxoxa izindaba ukukhulisa ukufinyeleleka okungokwemvelo, ukuthuthukisa ukuqwashisa ngomkhiqizo, futhi ngenxa yalokho, kukhuphule ukuthengisa.
Abamele abathengisi abasilele emuva, bakha izizinda zokuthengisa ku-LinkedIn okugcina kuholele ekwakhiweni okuphezulu kokuthengisa. I-Sales Navigator, ithuluzi le-LinkedIn laliklanyelwe ukuthatha le nqubo liye ezingeni elilandelayo. I-LinkedIn Sales Navigator ifana nenguqulo ekhethekile ye-LinkedIn uqobo. Ngenkathi i-LinkedIn isivele iyasebenza impela ekuthengiseni umphakathi, i-Sales Navigator inikeza ezinye izici eziningi ezizokuvumela ukuthi uthole amathemba ngokushesha kwi-niche yakho.
Ngaphandle kokuqhubeka, nangu umhlahlandlela osheshayo wokukusiza ukuthi uqale ngaleli thuluzi.
Iyini i-LinkedIn Sales Navigator?
I-LinkedIn Sales Navigator iyithuluzi lokuthengisa lomphakathi elenza kube lula kuwe ukuthola amathuba afanele ebhizinisi lakho. Ikwenza lokho ngokunikeza izinketho zokuhlunga ezijulile ngokuya ngemininingwane yomsebenzisi ekuvumela ukuthi wenze usesho oluthuthukile ukuthola amathuba ngqo owadingayo.
Kusetshenziswa i-Sales Navigator, abamele abathengisi basesha ngemikhombandlela yokhiye, baqaphe imisebenzi yabo, futhi babheke oxhumana nabo abafanayo abangabathinta. Lokhu kubenza bakwazi ukuba yisinyathelo phambili emdlalweni wabo ngokwakha amapayipi asebenzayo ukukhiqiza ukuthengisa okungcono.
Imisebenzi yokuthengisa yanamuhla (futhi siyayithanda). Abasebenzisi be-Sales Navigator bathola ukukhushulwa okungu- + 7% kuzinga lokuwina kusukela emisebenzini yesimanje yokuthengisa.
USakshi Mehta, Umphathi Omkhulu Wokumaketha Komkhiqizo, i-LinkedIn
Ngaphambi kokuthi ungene ekusebenziseni, ake sibheke ukuthi ngabe i-Sales Navigator iklanyelwe wena noma cha.
Ngubani Okufanele Usebenzise i-LinkedIn Sales Navigator?
I-LinkedIn Sales Navigator iyikho kanye okudingayo uma ungumthengisi we-B2B.
I-Sales Navigator ngumkhiqizo okhokhelwayo otholakala kuwo wonke umuntu ku-LinkedIn. Okubhaliselwe kungahluka. Ungakhetha imodeli yokubhalisela eyodwa, yethimba, noma yebhizinisi ngokuya ngezidingo zakho nosayizi wenkampani yakho.
I-LinkedIn Sales Navigator isivumela ukuthi sithole labo banikazi bamabhizinisi enhlanganweni futhi sifike kubo ngaphambi kokuthi babheke imikhiqizo eyisithupha eyahlukene yokubenza babone izinkinga zabo ngokuhlukile futhi ekugcineni baqonde ukuthi kunesixazululo esisodwa esingcono kakhulu.
U-Ed McQuiston, i-VP Global Sales, iHyland Software
Yazi ukuthi iHyland, i-Akamai Technologies, ne-Guardian bayisebenzise kanjani i-LinkedIn Sales Navigator ekuthengiseni umphakathi.
Ungayisebenzisa Kanjani i-LinkedIn Sales Navigator
Kusukela kokuyisisekelo kwe-Sales Navigator ukwenza okuhle kuleli thuluzi ngo-2020, sikubekele zonke izici. Nakhu ukuthi uqala kanjani ekuqaleni.
1. Qala Isivivinyo Sakho Samahhala
Into yokuqala okudingeka uyenze ukuya kufayela le- Ikhasi le-Sales Navigator bese uchofoza ku Qala Isivivinyo Sakho Samahhala inketho. I-LinkedIn ikuvumela ukuthi usebenzise I-Sales Navigator mahhala izinsuku ezingama-30. Ngakho-ke, qiniseka ukuthi usebenzisa ngokugcwele lokho ngenyanga yakho yokuqala.
Uzodinga ukuhlinzeka ngemininingwane yekhadi lakho lesikweletu ukuze ubhalisele lokhu kunikezwa. Ngokwengeziwe, ngeke ukhokhiswe noma yini uma ukhansela okubhalisile ngaphambi kokuphela kwesikhathi sesilingo.
Ngemuva kwalokho uzobhekiswa kuwebhusayithi ye-Sales Navigator, futhi iyipulatifomu ehlukile uqobo. Noma yini oyenzayo lapha ngeke ithinte i-akhawunti yakho ejwayelekile ye-LinkedIn.
Setha i-Akhawunti Yakho
Lapho usubhalisele i-akhawunti, udinga ukusetha okuncamelayo ngokufanele.
Ungenza ngezifiso i-akhawunti yakho ye-Sales Navigator ukusetha okuncamelayo okunjengezihloko zomsebenzi, ama-vertical, nezifunda ofuna ukuzikhomba.
Ekuqaleni, i-Sales Navigator izokunikeza inketho yokonga ukuxhumana kwakho kwe-LinkedIn okukhona njengokuhola. Ngokwengeziwe, ungavumelanisa futhi i-Sales Navigator ne-Salesforce noma iMicrosoft Dynamics 365 ukungenisa bonke oxhumana nabo nama-akhawunti. Kukhona nezinye izinketho eziningi ongazenza hlanganisa i-LinkedIn nezinye izinhlelo zokusebenza uma usebenzisa amanye ama-CRM.
Okwamanje usuqedile ngengxenye yokuqala yokusetha i-akhawunti yakho. Manje usungabuka futhi ulondoloze izinkampani ze-Sales Navigator eziphakamisa. Ukugcina inkampani ku-akhawunti yakho kukuvumela ukuthi ulandele izibuyekezo, ulandelele umkhondo omusha, futhi uthole izindaba eziqondene nenkampani ethile.
Lokhu kukugcina unolwazi ngaphambi kwengxoxo yakho yokuqala nekhasimende elingaba khona. Kodwa-ke, uma ungakaqiniseki ukuthi yiziphi izinkampani okufanele uzigcine, ungangeqa le ngxenye bese uyengeza kamuva.
Okokugcina, udinga ukugcwalisa imininingwane yokuthi yiziphi izinhlobo zemikhombandlela oyifunayo. Ngalokhu, ungafaka imininingwane emayelana nesifunda sakho sokuthengisa, izintshisekelo zomkhakha, nemisebenzi oyisebenzisayo.
3. Thola Ukuhola Namathemba
Into elandelayo okufanele uyenze uma usuqedile ngokuncamelayo kwe-akhawunti yakho ukucinga amathemba nokwakha uhlu lokuhola. Indlela elula yokwenza lokhu ukusebenzisa i-Lead Builder - ithuluzi ngaphakathi kwe-Sales Navigator enikeza izihlungi zokusesha ezithuthukile. Noma ngubani osebenzisa i-Sales Navigator, ukwazi ukusebenzisa i-Lead Builder kuyisinyathelo esibalulekile.
Ukuze uthuthukise izindlela zakho zokucinga, ungasesha iziqu ezithile zomsebenzi noma izinkampani. Uma usuqedile ukusetha amapharamitha wakho wokusesha, chofoza inketho yokuSesha ukuze ubone imiphumela. I-Sales Navigator izokunikeza idatha eningi kakhulu emiphumeleni yayo kunaleyo ongayithola enguqulweni ejwayelekile ye-LinkedIn.
Eduze kwayo yonke imiphumela, uzothola ifayela le- Gcina njengoMholi inketho. Ungakusebenzisa lokhu ukonga amathemba afanele. Funa amathemba akho ngokuhlakanipha esikhundleni sokukhetha abantu abangahleliwe ngaphandle kwe-bat.
Isinyathelo esilandelayo ukusindisa ukuhola ku-akhawunti. Lapha, ama-akhawunti bhekisa ezinkampanini ofuna ukuzilandela ukuhambisana nentuthuko yakamuva.
Ngakwesokunxele sekhasi, uzothola izinketho zokuhlunga eziningana, kufaka phakathi imboni, ukubizwa, igama nesibongo, ikhodi yeposi, usayizi wenkampani, izinga lobudala, neminyaka yesipiliyoni.
Ngokwengeziwe, i-Sales Navigator iphinde inikeze isici esibizwa ngeTeamLink. Ungasebenzisa i-TeamLink ukuhlunga imiphumela yakho ukubuka ukuxhumana okuhlanganisiwe noma kwethimba. Uma iTeamLink ibona ukuxhumana komuntu phakathi kwethemba lakho nelungu leqembu, ungacela ukuxhumana kwakho mutual ukwethula. Ekugcineni, ngemuva kokungeza amathemba njengokuhola, uzokwazi ukuwabuka kuthebhu Yokuhola.
4. Izintandokazi Zokuhlunga Ukuthengisa
Ekhasini lezilungiselelo lephrofayili yakho ye-Sales Navigator, uzobona Okuncamelayo Kokuthengisa phakathi. Ukusuka lapha, unganciphisa uhlu lwakho lwamakhasimende olufanele ngokususelwa kumkhakha, i-geography, umsebenzi, nosayizi wenkampani.
Lokhu okuncamelayo kuzovela noma kunini lapho uhlola iphrofayili yalowo ofuna ukukuthola. Futhi i-LinkedIn izophinde ikukhombise ukuhola izincomo ngokususelwe kokuncamelayo okusetayo.
Lesi cishe yisici sokuhlola esingaba yimpumelelo kunazo zonke ku-Sales Navigator. Ungasebenzisa futhi usesho oluthuthukisiwe kumkhondo noma kuma-akhawunti. Kunezihlungi zokusesha ezingaphezu kwezingama-20 ongazisebenzisa oseshweni lwakho. Lokhu kufaka phakathi amagama angukhiye, isihloko, izinkambu zenkampani nokunye okuningi.
5. Hlola Imikhondo Yakho Elondoloziwe
Ekhasini eliyisiqalo le-Sales Navigator, ungalandelela zonke izibuyekezo zakamuva nezindaba ezihambisana nemikhondo yakho egciniwe. Into enhle ngeSales Navigator ukuthi ungabona izibuyekezo nakubantu abangaxhumani nabo. Ngayo yonke le mininingwane kumathemba akho, ungabhala imilayezo engcono ye-InMail (imiyalezo eqondile) ukuze uyenze.
Futhi, uma ufuna ukunciphisa inkundla yezibuyekezo zakho, sebenzisa lezo zihlungi ezingakwesokudla kwekhasi. Kuthebhu yama-Akhawunti, uzokwazi ukubona uhlu lwezinkampani ozigcinile. Ukuze wazi okwengeziwe ngenkampani, chofoza ku-Akhawunti ye-View. Lapho, ungathola futhi ungeze abantu abaningi futhi uthole imininingwane yakamuva mayelana nezinkampani zabo.
Ngaphezu kwalokho, ungachofoza inketho ethi 'Bonke Abasebenzi' ukubona wonke umuntu osebenzela leyo nkampani. Lesi isici esihle kakhulu enembile ngoba sikuvumela ukuthi uxhume kunoma ngubani enkampanini nganoma yisiphi isikhathi.
6. Yakha Oxhumana Nabo
Ngalesi sikhathi, usuwabonile amathemba akho futhi walandela ngenkuthalo intuthuko yabo. Manje, uthintana kanjani nabo?
Isu elihle kakhulu ongalisebenzisa lokuxhumana nama-akhawunti akho abalulekile ukuwathumela imiyalezo efanele futhi efike ngesikhathi. Ngosizo lwe-Sales Navigator, ungajwayelana nemisebenzi ye-LinkedIn yomthengi wakho.
Ungazi ukuthi ungafika nini futhi ubathumele ama-InMails. Imiyalezo yobuciko futhi wakhe ithempulethi ngendlela emema ingxoxo eyakhayo. Futhi yilolo hlobo lwamasu okwakha ubuhlobo oluvula indlela yakho ebheke empumelelweni yokuthengisa komphakathi.
Kodwa-ke, i-LinkedIn Sales Navigator inokuncipha okukodwa okuncane. Kufanele ufinyelele kuwo wonke umkhombandlela wakho owodwa ngesandla. Lokhu kungadla isikhathi esiningi.
Enye indlela yokugwema lo msebenzi okhokhisa intela ukwenza inqubo yakho yokuthumela imiyalezo isebenze. Ungakwenza lokho kalula ngosizo lwamathuluzi we-LinkedIn automation.
Qaphela ukuthi akuwona wonke amathuluzi we-automation aphephile. Uma ufuna ukuphepha nokusebenza kahle kuqinisekisiwe, kungcono ukhethe Expandi ngenqubo yakho yokuthengisa ezenzekelayo. I-Expandi iqinisekisa ukuphepha kwe-akhawunti yakho ngokusebenzisa umkhawulo wayo wokuphepha owakhelwe ngaphakathi wokulandelela kanye nezicelo zokuxhuma, ukuthumela imiyalezo kungakapheli amahora ahleliwe okusebenza, nokususa izimemo ezinqwabelene ezilindelwe ngokuchofoza okukodwa nje.
Siyazi ukuthi ukuthengisa nokuhlwaya umphakathi kungaba ngumthwalo omkhulu uma ungasebenzisi amathuluzi afanele noma izinsiza ezihamba phambili. Usebenzisa ipulatifomu efana ne-LinkedIn Sales Navigator kukuvumela ukuthi wakhe uhlu olukhulu lwethemba ngokushesha okukhulu nangomzamo omncane. Ngemuva kwalokho ungaluthatha lolu hlu ulungenise ku-Expandi, lokho kuzokwenzela imisebenzi yakho edla isikhathi.
7. Sebenzisa imininingwane kusuka ku-Sales Navigator
Kunezici eziningana ku-Sales Navigator ongazisebenzisa kahle uma wazi ukuthi uzisebenzisa kanjani kahle. Isibonelo, uma udinga imikhondo emisha, i-Sales Navigator ingancoma ukuhola ngokususelwa kulwazi lwephrofayili yakho nokusetshenziswa kwayo.
Futhi, uma unokuhola okuthembisayo kepha okunakekela okuphezulu, i-Sales Navigator ikuvumela ukuthi unikeze amanothi namathegi kuphrofayela yekhasimende. Iphinde ivumelanise ne-CRM yakho.
Ngaphezu kwalokho, uma unentshisekelo yokumaketha kwe-LinkedIn kwangaphakathi, i-Sales Navigator izokunikeza ukubonakala okwandisiwe. Ngakho-ke, ungabuka ukuthi ngubani osanda kubuka iphrofayili yakho. Ngaleyo ndlela, ungazi ukuthi ngubani osevele unentshisekelo kuwe nenhlangano yakho.
8. Nikeza Amathemba Inani
Ku-LinkedIn, amathemba agcwalisa ifayili le- Izintshisekelo isigaba sephrofayili yabo empeleni bakwenzela umusa omkhulu. Ngalesi sizathu, bakunikeza lonke uhlu lwezihloko ongazisebenzisa njengo:
Isisekelo sengxoxo ukuqonda kangcono ubuntu babo nezinto eziza kuqala kubo
Imephu yomgwaqo yokuthi inkampani yakho nemikhiqizo yayo ingahlangabezana kanjani nezidingo zabo
Ukwazi ukuthi imiphi imikhondo yakho enentshisekelo kuyo nokuqonda ukuthi imikhiqizo yakho ingabanikeza kanjani inani abalifunayo kuyindlela enhle. Izokunikeza isandla esiphakeme kakhulu esincintisana nabo abangenandaba ngokwanele ukwenza indlela yabo ekuholeni kwabo.
9. Faka i-Sales Navigator Extension ku-Chrome
Kuyiqhinga elilula elikongela isikhathi esiningi namandla. Isandiso se-Chrome se-Sales Navigator ikuvumela ukuba ubone amaphrofayili we-LinkedIn kusuka ngaphakathi kwe-akhawunti yakho ye-Gmail. Ngokwengeziwe, lesi sandiso singakuqondisa nangezihloko ezihlukanisa ice, sikulondolozele imikhondo, futhi sikukhombise idatha yeTeamLink.
Uma ufundwe kuze kube manje, kukhona umbuzo owodwa ongafuna ukuwubuza:
Ngabe i-LinkedIn Sales Navigator ifanele imali yakho?
Ukuphendula kafushane, yebo, kunjalo. Ngenkathi izinhlangano zamabhizinisi amancane nezentengiso kufanele ziqale zizame inguqulo yamahhala ukubona ukuthi kufanele yini ukutshala imali ngalo mzuzu, amabhizinisi amakhulu kufanele nakanjani asebenzise leplatifomu ukuthola amapayipi wokuthengisa angcono nokuhamba komsebenzi okusebenzayo.
Idemo ye-LinkedIn Sales Navigator I-Expandi LinkedIn Automation
Tags: b2bukumaketha kwe-b2bexpandithola imikhondothola imikhondo namathembathola imikhondo onlinethola amathembaLinkedInitilogo lokuthengisa elixhumeneimicrosoft dynamics 365itilosi lokuthengisasalesforce